November 2013 ~ Myanmar Online News
12:56 AM အထွေထွေ No comments
12:53 AM အထွေထွေ No comments
ဘုရားရှင်က 'မကောင်းမှုက ကောင်းကျိုးပေးသည်ဆိုခြင်းမှာ' မဖြစ် နိုင်။ မကောင်းမှုက မကောင်းကျိုးကိုသာ ပေးသည်။ ကောင်းသောအမှုက မကောင်းကျိုးပေးသည် ဆိုခြင်း မှာ မဖြစ်နိုင်။ ကောင်းမှုက ကောင်းကျိုးကိုသာ ပေး သည်ဟူ၍ မိန့်တော်မူချက်မှာ ကံကံ၏အကျိုးကို ရှင်း ရှင်းလင်းလင်း ဟောဖော်ညွှန်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါ၏။ ဘုရားရှင်၏ ဤအဆုံးအမတော်ကို စဉ်းငယ်မျှပင် သံသယမ၀င်ဘဲ ရာနှုန်းပြည့် ယုံကြည်မှသာ ကံကံ၏ အကျိုးကို ယုံကြည်သူဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဤလောကတွင် မကောင်းမှုတွေနှင့် အသက် မွေးနေသော်လည်း ငွေကြေးဥစ္စာချမ်းသာနေသူတွေ ရှိပါ၏။ ထိုသူတို့ကို အပေါ်ယံရှပ်ကြည့်ပြီး မကောင်း မှုက မကောင်းကျိုးပေးသည်ဟူသော အချက်ကို သံသယရှိသူတွေလည်း ရှိပါ၏။ မယုံကြည်သူတွေလည်း ရှိပါ၏။ စင်စစ်ထိုသို့ သံသယရှိသူ မယုံကြည်သူတို့ သည် 'ကောင်းကျိုးပေးသည်'ဟူသော အချက်ကို ငွေ ကြေးဥစ္စာချမ်းသာခြင်းတစ်ခုတည်းဖြင့်သာ တိုင်းတာ ယူဆထားသူတွေဖြစ်ပါ၏။
မသမာသောနည်းလမ်းများဖြင့် ၀ိသမလောဘ ကြီးမားစွာ ရှာဖွေသောကြောင့် ဓနဥစ္စာချမ်းသာသော မိသားစုတချို့ကို တွေ့ဖူးပါ၏။ ထိုသူတို့သည် ငွေကြေး ချမ်းသာသော်လည်း စိတ်မချမ်းမြေ့ကြ။ မိသားစု၏ လူမှုရေးကျန်းမာရေးဘက်တွင် ကံမကောင်းမှုတွေ များ လှ၏။ သားဖြစ်သူက ဆေးသမား အလောင်းအစား သမားဖြစ်သောကြောင့် ပြဿနာပေါင်းစုံကို ငွေထုပ် ပိုက်၍လိုက်ရှင်းနေရ၏။ သမီးဖြစ်သူကလည်း အနေ အထိုင် မဆင်ခြင်၊ ရည်းစားများသည်။ ငွေအသုံးအဖြုန်း ကြီးမားသည်။ ဒီအထဲမှာ အိမ်ထောင်စု၏ ဦးစီးခေါင်း ဆောင်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ခြေရှုပ်သည်။ ဇနီးဖြစ်သူ ကလည်း သားရေးသမီးရေး လင်ယောက်ျားအရေး တို့ကြောင့် စိတ်ဖိစီးတင်းကျပ်မှုများကာ မကျန်းမာ။ မိစ္ဆာအာဇီဝမှုဖြင့်ရသော ငွေကြေးဥစ္စာများသည် အိမ် ထောင်ဦးစီးနှင့် သားသမီးတို့၏ အကျင့်စာရိတ္တကို ဖျက်ဆီးလျက် ပြန်ထွက်သွားသည်။ မတရားမှုဖြင့် ရှာ ထားသော ဓနဥစ္စာများသည် ၀ိသမလောဘသမား၏ လက်ထဲတွင် ကြာကြာမြဲမနေ။ တစ်ချိန်ချိန်တွင် ပြန် ထွက်တတ်ရာ ထွက်သောအခါ ကောင်းကောင်းမ ထွက်။ သောက၊ ဒေါသ၊ ဒေါမနဿ၊ ဗျာပါဒတရား ဆိုးတို့ကို လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးစွမ်းပြီးမှ ပြန်ထွက် တတ်ပါ၏။
ကံကောင်းခြင်း၊ ကံမကောင်းခြင်းကို ငွေ ကြေးဥစ္စာချမ်းသာ<ကယ်ဝခြင်းတစ်ခုတည်းအပေါ်မှာ သာတည်မှီလျက် တိုင်းတာဆုံးဖြတ်ခြင်းသည် ဘောင် ကျဉ်းလွန်းလှပါသည်။ ငွေကြေးချမ်းသာသော်လည်း ပြဿနာအဖုံဖုံ၊ စိတ်ဆင်းရဲစရာမျိုးစုံနှင့် ဖိစီးမွန်းကျပ် မှုများနေလျှင် ကံကောင်းသည်ဟု မဆိုနိုင်ပေ။ မိစ္ဆာ အာဇီဝမူဖြင့် ကြီးပွားသူတို့၏ လတ်တလောချမ်းသာ မှုကိုကြည့်ပြီး 'မကောင်းတာလုပ်လဲ ကောင်းကျိုးပေး တာပါပဲ'ဟုဆိုတတ်ကြသူများသည် ထိုမိစ္ဆာအာဇီဝ သမားများ၏ အနာဂတ်ကာလကို လှမ်းမျှော်ကြည့်ရန် မူ သတိမေ့လျော့နေတတ်ကြပေသည်။
သမ္မာအာဇီဝမှုဖြင့် အသက်မွေးပြီး ငွေ ကြေးဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်ဝမှုမရှိစေကာမူ အစ၀ယ် ပြဿနာရှင်းရှင်း စိတ်ဖိစီး မွန်းကျပ်မှုကင်းကင်းဖြင့် ရောင့်ရဲအေးချမ်းစွာ နေသူများကို ငွေကြေးရှုထောင့် တစ်ခုတည်းမှကြည့်ကာ ကံမကောင်းသူများဟု အကဲ ဖြတ်သော် ထိုသူသည် 'ဘ၀၏တန်ဖိုး'ကို နားမလည် သူ၊ ရုပ်ဝါဒီသမားသာဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ငြိမ်းအေးချမ်း မြေ့ခြင်း၏ ရသကို မခံစားတတ်သူသာဖြစ်ပေမည်။
အထက်ပါဘုရားရှင် ဟောတော်မူသည့် ကောင်းမှုက ကောင်းကျိုးပေး၍ မကောင်းမှုက မကောင်းကျိုးပေးသည်ဟူသော အချက်အပေါ် စဉ်း ငယ်မျှပင် သံသယမ၀င်မူလျက် ရာနှုန်းပြည့်ယုံကြည် အပ်ပါ၏။ ထိုယုံကြည်ချက်ကို နှလုံးဝယ်ပိုက်စွဲလျက် ရခဲလှစွာသော လူ့ဘ၀ကိုရစဉ်အခိုက် ကောင်းသော ကိုယ်မှု၊ နှုတ်မှု၊ စိတ်မှုတို့ဖြင့် ဘ၀ကောင်းဘ၀မွန် တစ်ခုကို မြတ်မြတ်နိုးနိုး ထုဆစ်ပုံဖော်သွားအပ်ပါ သည်။ ။
2:38 AM ပြည်တွင်းသတင်း No comments
ASEAN-Japan Music festival ပွဲကို တက်ရောက်ဖျော်ဖြေပေးခဲ့တဲ့ အဆိုတော် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်က သူ့ကိုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ ဂျပန်ရောက် မြန်မာ ပရိတ်သတ်တွေကို သူရဲ့ကိုယ်ပိုင် စာမျက်နှာမှာ တောင်းပန်ထားတာကို ကူယူဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၂၉.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ 7Day Daily သတင်းစုစည်းမှု
2:19 AM သတင်းများစုစည်းမှု No comments
မြန်မာမှမှောင်ခိုသစ် အဓိက၀ယ်နေသော တရုတ်နိုင်ငံကို တရားမ၀င်သစ်ထုတ်လုပ်မှု တိုက်ဖျက်ရေး ပါဝင်ရန် အီးယူဖိအားပေးမည်
လဲနေသူ ထူ၊ အားနည်းသူ ကယ်၊ မယ်တော်ရဲ့မယ်မယ်
2:07 AM အထွေထွေ No comments
နေထွက်သည်နှင့် သူတို့ ရောက်လာတတ်သည်။ ငယ်ရွယ်သည့် မိခင်များ၊ ဖခင်များက စိုးရိမ် သောကအပြည့် မျက်နှာများနှင့် သူတို့၏ သားသမီးများကို ပွေ့ပိုက်ပြီး အရိပ်ထဲတွင် ထိုင်ကာ ဆေးခန်း ဝန်ထမ်းများကို စောင့်နေတတ်သည်။
11:38 PM အထွေထွေ No comments
မျက်ခွံပေါ်မှ ထူးထူးခြားခြား မိတ်ကပ် ဆေးရေးပန်းချီ
အခြေခံဥပဒေအရ သမ္မတ ရှာပုံတော်
2:02 AM အထွေထွေ No comments
၂၈.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ 7Day Daily သတင်းစုစည်းမှု
12:42 AM သတင်းများစုစည်းမှု No comments
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကနှင့်အဖွဲ့ ဂျပန်သို့ ထွက်ခွာ
အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ကာချုပ်ဆုံးဖြတ်ရမည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော
မူးယစ်တရားခံများကို လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုရာမှ ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ရွာသားများ ပဋိပက္ခဖြစ်
မန္တလေးရှိ တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများစုမှာ တရားမ၀င်ဖြစ်နေဟု တရုတ်စီးပွားရေးကောင်စစ်ဝန်ပြော
12:11 AM ကျန်းမာရေး No comments
8:48 PM အထွေထွေ No comments
ဓာတ်ပုံတစ်ခုဟူသည် သမိုင်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ထိုသမိုင်းသည် သံမဏိအမျိုးသမီးဟု ကမ္ဘာကအမည် နာမတပ် ရသည်အထိ လေးစားကြသော မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အရေးအတွက် ဘဝကို ပေးဆပ်မြှုပ်နှံထားခဲ့သည့် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရှေ့တန်းရောက်ခွင့်မရသော မိသားစုသမိုင်း။ ၁၉၈၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ဝ ရက်၊ စနေနေ့က မိဘနှစ်ပါးစုံညီစွာ ဖြင့် သားနှစ်ဦးကို ရှင်ပြုအလှူတော်မင်္ဂလာ ကျင်းပခွင့်ရခဲ့သည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။ အသံမဲ့ စကားလုံးများက ခံစားတတ်သူတိုင်း၏
ထိုပုံကို အင်တာနက်ဖေ့စ်ဘွတ်တွင် တင်ခဲ့သူက မစီစီရိုဇာ။ သူက ထိုပုံကို ကျော်ကြားမှုနှင့် အကျိုးမျှော်လင့်ချက် တစ်စုံ တစ်ရာအတွက် တင်ခဲ့ခြင်း မဟုတ်။ ထိုပုံ တင်ဖြစ် ခဲ့ခြင်း တွင် အဓိပ္ပာယ်များစွာ ရှိပြီး ထိုဓာတ်ပုံတွင်လည်း ပြန် လည်တူးဆွစရာသမိုင်းနှင့် ခံစားချက်များစွာရှိပါသည်။
”မေမေစု အကြောင်း ဆိုရင် သူ အကျယ်ချုပ်တုန်း က ဆင်းရဲဒုက္ခခံခဲ့ရတာတွေ ပဲ လူတွေက ပြောကြတယ်။ မိသားစုလည်း ဥကွဲ သိုက် ပျက် ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတယ်။ မိသား စုဆိုတာက ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာတွေခြားနေရတယ်။ ဒီမှာကျတော့လည်း ယောက်ျားလည်းမရှိ၊ သားတွေလည်းမရှိ၊ အဖေလည်းမရှိ အမေလည်းမရှိနဲ့ မြန်မာပြည်သူ သန်း ၆ဝ အတွက်ပဲ သူနေခဲ့တာပါ။ တကယ်တော့ ဒီပုံတင်တာဟာ ဗိုလ် ချုပ်မို့ မဟုတ်ဘူး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မို့လို့ မဟုတ်ဘဲ၊ အဲဒါ တွေ ကြားချပြီး လူသားဆန်ဆန်
နှလုံးသားတွေကို ပြချင်တာပါ” ဟု မစီစီက သူပုံတင်ဖြစ်ခြင်း၏ ခံစားချက်ကို ပြောသည်။
သူ့ခံစားချက်က ပြောစရာများသည်။ တကယ်တော့လည်း အမှန်တရားဖြစ်ပါသည်။ ဒေါ်စု၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက ကင်ဆာ ရောဂါဖြစ်ပွားချိန်တွင် ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြ ချက်ဖြင့် ပြည်ဝင် ခွင့်မရခဲ့ချိန်တွင်တော့ စိတ်ဂျုံးဂျုံးကျကာ ကွယ်လွန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ် သည်။
6:39 PM အထွေထွေ No comments
ဟိုတလောက ရန်ကုန်ကနေ မန္တလေးသွားမယ်၊ ရထားမစီးဖြစ်တာ ကြာပြီ ဆိုပြီး ရထားလက်မှတ် ၀ယ်တယ်။
အကောင်းဘက်ကပြောရရင် ရထားလက်မှတ်က ရှေးရှေးတုန်းကလိုပါပဲ၊ ကတ်ထူစက္ကူသေးသေးလေးနဲ့။
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင်တော့ "နိုင်ငံတော်"ရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်က မီးရထားနဲ့ မဆိုင်သေးဘူးထင်ပါရဲ့ လို့ ဆိုရမယ်။
ခပ်ညစ်ညစ်ကတ်ထူစက္ကူပေါ် မထင်မရှား ပုံနှိပ်ထားတယ်။ ရက်စွဲ၊ ခရီးသည်အမည်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် နံပါတ်တွေကို လွတ်တဲ့နေရာမှာ လိုက်ဖြည့်ထားတယ်။
ရထားပေါ်မှာ လက်မှတ်စစ်တွေက လက်မှတ်တောင်းကြည့်ပြီး လက်မှတ်ပေါ် ဟိုဟိုဒီဒီ ခြစ်ဦးမယ်။
အပြောင်းအလဲ မလုပ်ချင်တာ မဟုတ်ပါ၊ စက္ကူချွေတာခြင်းပါ လို့ ဆိုချင် ဆိုနိုင်တာပေါ့။
မြန်မာ့မီးရထားလက်မှတ်က ဒီလိုအခြေအနေ ဖြစ်နေရင် ရထားတွေကရော ဘယ်လိုအခြေအနေ ရှိပါသလဲ။
ကြမ်းပိုးကိုက်တယ်လို့ တယောက်က ဆိုပါတယ်။
ကံကောင်းတယ် ပြောရမလား၊ ကံဆိုးတယ် ပြောရမလား... အဲဒီရထား မစီးဖြစ်လိုက်ဘူး။ ဘူတာဆင်းခါနီးမှမော်လမြိုင်ဘက်ကို အရေးပေါ်သွားစရာကိစ္စတခု ပေါ်လာတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ဒီလက်မှတ်ကို အမှတ်တရ သိမ်းထားမိတာပါ။
ရထားစီးရတာ ကြမ်းပိုးကိုက်မယ်၊ အချိန်ပိုကြာမယ်ဆိုကြပေမယ့် သူ့မှာ အားသာချက်တွေ ရှိပါတယ်။
မြို့ပြင်အဝေးပြေးဂိတ်ကို တကူးတက မသွားရဘဲ မြို့လယ်ခေါင် ဘူတာကြီးကနေ တက်စီးနိုင်တယ်။
မန္တလေးရောက်ရင်လည်း ဘူတာကြီးက မြို့ထဲမှာပဲ ရှိနေသေးတယ်။ ကားကြီးဝင်းလို မြို့ပြင် မဟုတ်သေး။
ပြီးတော့ ကားခထက် ထက်ဝက် သက်သာမယ် - ရိုးရိုးတန်း သစ်သားခုံနဲ့ ဆိုရင်ပေါ့လေ။ ဒါကလည်း အရေးကြီးတယ်။ ချွေတာရေးက အရေးကြီးတယ်။ မီးရထားဝန်ကြီးကလည်း ကျနော့်လိုပဲ ချွေတာရေးသမား ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။
ရထားလက်မှတ် ၀ယ်ရခြင်း အကြောင်းရင်း နောက်တခုက လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်ကျော်က အကြိမ်ကြိမ် စီးခဲ့တဲ့ ရထားကို သံယောဇဉ်မကုန်သေး၊ ရထားလမ်းရှုခင်း ပျင်းနေအောင် ကြည့်ရတဲ့အရသာကို ပြန်ခံစားကြည့်ချင်လို့ပါ။
ရထားနဲ့သွားရင် ဂျုံးဂျုံးဂျက်ဂျက်သံစုံကို စိတ်ပျက်ဖွယ် ကြားရမှာ သိပေမယ့် ရထားစီးချင်စိတ် မပျောက်သေး။
ရထားစီးရတဲ့ရသစုံကို ခံစားကြည့်ချင်သေး။ လူတွေကို လေ့လာချင်သေး။
အခုတော့ ခရီးက လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားတာကြောင့် ရထားလက်မှတ်လေးကိုပဲ လေ့လာနေရပါတယ်။
၂၇.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ 7Day Daily သတင်းစုစည်းမှု
5:26 AM သတင်းများစုစည်းမှု No comments
ယာဉ်တင်သွင်းသူများ စိတ်ကြိုက်နံပါတ် ရွေးချယ်ခွင့်ပြုရာမှ ကျပ်သန်းပေါင်း သုံးထောင်ကျော်ရရှိ
၁၂ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသူကို ခိုးယူပေါင်းသင်းသူ တပ်မတော်သားအား အမှုဖွင့်
မဟာအောင်မြေ နှစ်လောင်းပြိုင်လူသတ်မှုတွင် ပါဝင်သူနှစ်ဦး ဖော်ထုတ်နိုင်
မိကျောင်းကန်မှ ဆန္ဒပြသူသုံးဦးကို ထောင်ဒဏ်သုံးလချသဖြင့် သပိတ်စခန်းဖွင့်ကာ အချက် ၇ ချက်တောင်းဆို
ရေကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းများမချသေးမီ နယ်စပ်ပင်လယ်ပြင်လုံခြုံရေးအတွက် တပ်မတော်(ရေ) တာဝန်ယူထား
ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်ရန် UNFC ဖိတ်ခေါ်
မြေမြှုပ်မိုင်းကြောင့် အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်မှုအများဆုံးနိုင်ငံစာရင်းတွင် မြန်မာ အဆင့်သုံးချိတ
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ အဆောင်ထားရန်အစီအစဉ် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအားနည်း၍ ဆရာ၊ ဆရာမများ အခက်တွေ့
ငြိမ်းချမ်းရေး ဆန္ဒပြလမ်းလျှောက်သူနှစ်ဦးကို တစ်မြို့နယ်လျှင် ငွေဒဏ်တစ်သောင်းစီချမှတ်
ပြည်တွင်းကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ကမ္ဘာ့ဘဏ် စစ်တမ်းကောက်မည်
၂၆.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ VOA သတင်းစုစည်းမှု
2:24 AM သတင်းများစုစည်းမှု No comments
တရုတ်လေကြောင်း ကာကွယ်ရေး ဥပဒေသစ် ဂျပန်ကန့်ကွက်
၂၆.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ 7Day Daily သတင်းစုစည်းမှု
1:56 AM သတင်းများစုစည်းမှု No comments
အခြေခံဥပဒေတွင် သမ္မတ၏ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်ကို ပြင်မည်ဟု UNFC ပြော
ရခိုင်နှင့် ကချင် စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် ယူရိုသုံးသန်းတန်ဖိုးရှိ စားနပ်ရိက္ခာများ အီးယူထောက်ပံ့မည်
လူအင်အားကို အားပြုရတဲ့အသံတိတ်ရုပ်ရှင်ခေတ်အကြောင်း မင်းသမီးကြီးဒေါ်ခင်လေးဆွေနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
7:57 PM ရသ No comments
၂၅.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ VOA သတင်းစုစည်းမှု
5:29 AM သတင်းများစုစည်းမှု No comments
ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချဖို့ ဝါဆောညီလာခံ သဘောတူ
၂၅.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ 7Day Daily သတင်းစုစည်းမှု
4:03 AM သတင်းများစုစည်းမှု No comments
လက်ကျန်အမည်ပျက်စာရင်းဝင် ၃၀၀၀ မှာ နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့၏ အမည်ပျက်စာရင်းဝင်များဖြစ်သောကြောင့် ပယ်ဖျက်ပေး၍ မရတော့
အစိုးရက တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်ရပ်ကြေညာရန် UNFC တောင်းဆို
လီဟာ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့် မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ငါးဖမ်းရေယာဉ်များကို သတိပေး
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် စိန်ရတုခန်းမတွင် မိန့်ခွန်းပြောမည်
3:10 AM အထွေထွေ No comments
Marie Stopes International Myanmar မှ Country Director ဒေါက်တာ စစ်နိုင် (ဓာတ်ပုံ – စိုင်းဇော် / ဧရာဝတီ)
ဘိန်းဖြူ၊ မက်သဖက်တမင်းနှင့် ဘိန်းရှုခြင်း အလေ့အထက မြစ်ကြီးနား၊ ဗန်းမော်နှင့် ဖားကန့် မြို့နယ်များတွင် ကျယ်ပြန့်နေသည် (ဓာတ်ပုံ – Reuters)
6:40 AM ရသ2comments
ကျွန်တော် မျက်လုံးနှစ်လုံး ဖွင့်ဖွင့်ချင်း မြင်လိုက်ရတာက ကျွန်တော့်ကို စိတ်ဝင်စားစွာ ငုံ့ကြည့်သော ဇနီးနှင့် သားလေး… ကျွန်တော် ၀မ်းသာအားရ အော်ခေါ်လိုက်ချင်ပေမယ့် ပါးစပ်ထဲက ဘာသံမှ ထွက်မလာခဲ့..။ ချစ်နှင့် သားလေးကိုကြည့်ရတာ ကျွန်တော့်ကိုကြည့်ပြီး အတော့်ကို ပျော်ရွှင်နေပုံရသည်…။
"အမေရေ…၊ အထီးလေးဗျ..၊ အထီလေး…ဒီအကောင်ကို သားယူမယ်.."
"အင်း..ဟုတ်တယ်နော်.. စပ်ကြားလေးနဲ့.. ချစ်စရာလေး.."
အလို…၊ ကျွန်တော် ဘယ်ကို ရောက်နေတာလဲ..၊ ကျွန်တော် ဘာဖြစ်နေတာလဲ..? ကျွန်တော် နောက်ဆုံးသိလိုက်တာက ကျွန်တော် ချစ်တို့နဲ့အတူ နေ့လည်စာ ထမင်းစားပြီး အထမှာ မူးကနဲ ဖြစ်ပြီး မေ့လဲသွားခြင်း..၊ အခု.. ကျွန်တော်..ဘယ်ရောက်နေတာလဲ..၊ ကျွန်တော် သေဆုံးသွားခဲ့တာလား….
"ညိုမောင်း လို့ နာမည်ပေးလိုက်မယ်လေ…သားကြိုက်လား"
"ကောင်းတယ်အမေ.. အဖေသာရှိရင် ဒီကောင့်ကို သိပ်သဘောကျမှာဗျ…"
ကျွန်တော် သိလိုက်ပါပြီ..၊ ကျွန်တော် သေဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ..၊ ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်တော် ချစ်တဲ့ ချစ်ဇနီးနဲ့ သားလေးတို့နဲ့ စည်းတစ်ခု ခြားထားတဲ့ ဘုံဘ၀ တစ်ခုမှာ နွားဘ၀နဲ့ လာဖြစ်နေရပြီလေ…၊ ဒီအချိန်မှာပဲ ကျွန်တော့်ကို မွေးဖွားပေးတဲ့ နွားမကြီးကို ကျွန်တော့်ကို ညှင်သာစွာ လျှာနဲ့လျှက်ပြီး ကိုယ်ပေါ်က အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ရှားပေးလိုက်သည်။ လူ့ဘ၀က အရက်သောက်..၊ ဖဲရိုက်ပြီး မိသားစုပေါ် တာဝန်မကျေခဲ့တဲ့ကျွန်တော် ဒီဘ၀မှာတော့ နွားဘ၀ နဲ့ ရှေးဘ၀က ၀ဠ်ကြွေးတွေ ဆပ်ရတော့မယ် ထင်ပါရဲ့ဗျာ…။
ကျွန်တော်နွားဘ၀ရောက်နေရပေမယ့် ကံကောင်းတာလေး တစ်ခုတော့ရှိသည်။ သားလေးက ကျွန်တော့်ကို တော်တော်ချစ်သည်..။ အရင်ဘ၀က သားအဖ တော်စပ်ခဲ့တာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ သားလေးရဲ့ ကျောင်းသွား ကျောင်းပြန်ချိန် စီးတော်ယာဉ်မှာ ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သားလေးရဲ့ ကစားဖော် ကျွန်တော်သာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျောင်းပိတ်ရက်တွေဆို သားလေးက ကျွန်တော့်ကို တောစပ်တွေဆီ ခေါ်သွားတတ်သည်။ သစ်ပင်ရိပ်အောက်မှာ သားလေးနဲ့ အတူတူ အိပ်ခဲ့ရတဲ့ အချိန် အခိုက်အတန့်တွေဟာ ကျွန်တော် လက်ရှိ ဘယ်ဘ၀ရောက်နေလဲဆိုတာကိုတောင် မေ့ပျောက်နိုင်စွမ်းခဲ့သည်။
ချစ်ကတော့ ကျွန်တော်လူ့ဘ၀တုန်းက ကျွန်တော့်ကိုအတော် ချစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော် ဆိုးသမျှ သည်းခံခဲ့သည်။ ယခုလည်း သူ့ရုပ် သူ့အရွယ်နဲ့ နောက်အိမ် ထောင်ပြုနိုင်သော်လည်း သူစိတ်မ၀င်စားခဲ့..၊ သားလေးနဲ့ ချစ်ရဲ့ ၀မ်းရေးအတွက် လယ်များကို သူရင်းငှားချထားပြီး ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ ချစ်ကို ကျွန်တော် မချီးကျူးပဲ မနေနိုင်…..။ တစ်ခါ တစ်ခါ ချစ်သည် အဝေးကို အကြာကြီး ငေးမောနေတတ်သည်။ ကျွန်တော့်ကို လွမ်းနေသည်ဟု အတတ် မပြောနိုင်သော် လည်း ကျွန်တော့်စိတ်က ကျွန်တော့်ကိုသာ လွမ်းစေချင်နေမိသည်။ ထိုအခါမျိုးတွင် ချစ်ကိုကျွန်တော် ပြေးပြီး ထွေးပွေ့ထားချင်မိသော် လည်း ဘ၀ချင်းစည်းခြား နေပြီဖြစ်သည့်အတွက် ကျွန်တော့်မှာ ချစ်ကိုကြည့်ပြီးသာ ၀မ်းနည်းနေရသည်။
ဒီလိုနဲ့ အချိန်တွေ တရွှေ့ရွှေ့ ကုန်ဆုံးမှန်းမသိ ကုန်ဆုံးခဲ့သည်။ နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်းတို့ အလီလီပြောင်းခဲ့သည်။ ထို့အတူ ချစ်၊ သားလေးနှင့် ညိုမောင်း ဆိုသော နွားပြာကြီး တစ်ဖြစ်လဲ ကျွန်တော်တို့၏ သံဃောဇဉ်သည်လည်း အတိုင်းအဆမရှိ ရစ်ပတ်ချည်နှောင်မိခဲ့ကြသည်။ သားလေးသည်လည်း အလယ်တန်း ကျောင်းသား ဖြစ်လာသလို ကျွန်တော်သည်လည်း အရွယ်ရောက်သည့် နွားပျိုတစ်ကောင် ဖြစ်လာသည်ပဲလေ…။
ဒီနှစ်…. ချစ်ရဲ့ လယ်တွေ သီးနှံထွက် မကောင်း၊ လယ်များ ပိုးကျသောကြောင့်၊ ရှိသမျှ လယ်တွေ ထုတ်ရောင်းခဲ့ရသည့် အပြင် ကျွန်တော့်ကို မွေးဖွားခဲ့သည့် နွားမကြီး တစ်ရှဉ်းကိုပါ ထုတ်ရောင်းခဲ့ရသည်။ တစ်ခုတော့ရှိသည်။ ချစ်တို့ စီးပွားရေး ဘယ်လောက်ပဲ ကျကျ၊ သူတို့ ကျွန်တော့်ကို ဘယ်တော့မှ ထုတ်ရောင်းလိမ့်မည် မဟုတ်မှန်း ကျွန်တော် ရဲရဲကြီး အာမခံရဲသည်။
"အမေ…၊ ညိုမောင်းကြီးကို မခိုင်းပါနဲ့လားဗျာ…၊ "
"မခိုင်းလို့ မရဘူးသားရဲ့..၊ အမေတို့မှာလည်း ဒီနွားတစ်ကောင်ပဲ ကျန်တော့တာ..၊ သူ့မှ မခိုင်းရင် အမေတို့ ဘာနဲ့စားကြမလဲ.. "
"သား..ထမင်းမစားတော့ဘူးဗျာ…၊ ညိုမောင်းကြီးကိုတော့ သူရင်းငှားတွေ လက်ထဲ မထည့်လိုက်နဲ့.."
"သြော်.သားရယ်.. ညနေဆိုလည်း ကိုယ့်အိမ်ပြန်လာအပ်မယ့်ဟာပဲ..၊ ဘယ်သူမှလည်း မတရားမခိုင်း ပါဘူးကွယ်..၊ နော်..၊ သားက လိမ္မာပါတယ်.."
ကျွန်တော် ကျေနပ်ပါတယ်..။ သူတို့ပြောနေတာကို ကျွန်တော် နားထောင်ပြီး ပျော်ရွင်နေပါတယ်..။ ကျွန်တော် မနက်ဖြန်ကစပြီး လယ်ထဲမှာ စရုန်းရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် သားလေးရဲ့ ကျွန်တော့်အပေါ် ထားရှိတဲ့ မေတ္တာတရားကို ကျွန်တော် တွေ့လိုက်ရသည်လေ..။ ကျွန်တော် ပျော်ပါတယ်ဗျာ..။ အလို….. ကျွန်တော့် ပါးပြင်ပေါ် မျက်ရည်တွေ စီးကျနေပါလား…၊ ကျွန်တော် ငိုနေတာမဟုတ်ပါဘူး..။ ပျော်နေတာပါဗျာ…။
နောက်နေ့ ကျွန်တော့်ကို သူရင်းငှားတွေ လာခေါ်တော့ သားလေးက အိမ်ပေါ်ကို ဆောင့်အောင့်ပြီး တက်သွားခဲ့သည်။ ချစ်ကတော့ ကျွန်တော့်ကို အစာကျွေးဖို့နဲ့ ရေမှန်မှန်တိုက်ပေးဖို့ မှာနေရှာသည်။ ချစ်လည်း ကျွန်တော့်အပေါ် သံဃောဇဉ်ကြီးကြောင်း ကျွန်တော် သိသည်။ ချစ်က ကျွန်တော့် နဖားကြိုးကို ဆွဲပြီး သူရင်းငှား လက်ထဲထည့်ပေးလိုက်သည်။ ကျွန်တော့်ကို ချစ်ဘယ်ထည့်ချင်ပါ့မလဲဗျာ..၊ ကျွန်တော့် မိန်းမအကြောင်း ကျွန်တော်သိတာပေါ့..။
တစ်ကယ်တော့ လယ်ထွန်ရတာ အတော့်ကို မလွယ်တဲ့ အလုပ်ဖြစ်သည်။ အရင်က သားလေးနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ ကြီးပျင်းလာပြီး မိမိကိုယ့်ကို ဘ၀မေ့နေသော ကျွန်တော့်အဖို့ ဒီနေ့သည် ကျွန်တော်သည် နွားတစ်ကောင်ဖြစ်ကြောင်း သင်ခန်းစာပေးလိုက်သည့်နေ့ ဖြစ်တော့သည်။ သူရင်းငှားကလည်း ချစ်မှာသည့် အစာကျွေးဖို့နေနေသာသာ ကြိမ်လုံးနှင့်သာ တဖြောင်းဖြောင်း တွယ်တော့သည်။ ကျောပေါ် တရစပ် ကျနေသော ကြိမ်ချက်များ၊ သူရင်းငှားပါးစပ်မှ အော်မြစ်တောက်တီး ဆဲဆိုသံများ မိမိရဲ့ ပုခုံးပေါ်တွင်တင်ထားသော လေးလံတဲ့ အရာများ..၊ လျှောက်ရန်ပင်ခက်ခဲသော လယ်ထဲမှာ အားသွန် ခွန်စိုက် ရုံးကန်နေရသော မိမိတစ်ကိုယ်လုံး ……..သြော်…. ခံပေအုံးတော့…၊ အရင်ဘ၀က ၀ဠ်ကြွေး တွေ ၀ဠ်ရှိ သမျှတော့ ခံလိုက်ပေအုံးတော့လို့…ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဖြေသိမ့်ရင်းနဲ့သာ……။
ညနေ လယ်သိမ်း အိမ်ပြန်တော့ ကျွန်တော့်ခြေလှမ်းတွေ တက်ကြွနေသည်။ ကျောင်းမှ လွှတ်သော ကလေးတစ်ယောက်လို အိမ်ကို အပြေးပြန်ရန် တာစူနေမိသည်။ သူရင်းငှားကတော့ ကျွန်တော့် အမူအရာကို ရိပ်မိသည်ထင့်..။
"သြော်..ညိုမောင်း..၊ အိမ်ပြန်ရတော့မယ်ဆိုတော့ ကြွနေတာပဲ..၊ အလုပ်ထဲမှာကျတော့ လေးတိလေးကန်နဲ့…ငါလုပ်လိုက်ရ…သေတော့မယ်.."
သူရင်းငှားရဲ့ ကြိမ်းမောင်းသံကို ကျွန်တော် ဂရုမပြုအား..၊ ကျွန်တော့်အား စောင့်ကြိုနေမည့် သားလေးရဲ့ မျက်နှာနဲ့ ချစ်ရဲ့ မျက်နှာကို မြင်ယောင်နေမိ သည်။ ကျွန်တော် အိမ်အမြန် ရောက်ချင်လှပြီ..။
ကျွန်တော့်ကို တွေ့တော့ သားလေးက ခြံဝန်းထိပ်က စောင့်နေရာကနေ ပြေးလာသည်။ ပြီးတော့ သူရင်းငှားလက်ထဲက ကြိုးကို လူယူပြီး ကျွန်တော့်ကို ခြံဝန်းထဲဆွဲခေါ်ခဲ့သည်။ ချစ်ကတော့ ကျွန်တော့်ကို ကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပုံရသည်။ သားလေးက ကျွန်တော့်ကို ဆွဲခေါ်သွားပြီး အစာကျွေး၊ ရေတိုက်သည်။
"ရှင်..၊ ညိုမောင်းကို ရိုက်တာလား.."
"အမရယ်..၊ နွားပဲ..၊ ပေကပ်ကြီးလုပ်နေရင် နည်းနည်းပါးပါး မောင်းပေးရမှာပေါ့.."
ချစ်ဘာမှ ပြန်မပြော….၊ အစာစားနေသော ကျွန်တော့်ကျောကို လက်နဲ့ လာသပ်ပေးသည်။ သေချာပါတယ်.. ချစ်ဝမ်းနည်းနေပါလိမ့်မယ်..၊ ဒါပေမယ့် မျက်ရည်တော့ ကျမှာ မဟုတ်ပါဘူး..၊ ချစ်က မျက်ရည်အလွယ်တကူ ကျတတ်တဲ့ မိန်းမမျိုးမှ မဟုတ်တာပဲလေ…၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ချစ်နဲ့ သားလေးရယ်..၊ မင်းတို့ နှစ်ယောက်အတွက်နဲ့ဆိုရင် ကိုယ်ဘယ်လောက် ပင်ပန်းပါစေ..။ အရင်ဘ၀က မကျေခဲ့တဲ့ တာဝန်တွေကို ဒီဘ၀မှာ တတ်နိုင်သမျှ ကျေခဲ့ချင်ပါတယ်... မင်းတို့ရဲ့ ခိုင်းနွား တစ်ကောင် အဖြစ်နဲ့ပေါ့လေ…။
ဒီနေ့ ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်ရတာ.. လုံးဝ စိတ်မပါ…။ ကျွန်တော့် စိတ်ထဲ တစ်ခုခုဖြစ်နေသည်။ စိတ်ထင့်နေသည်ဆို ပိုမှန်လိမ့်မည်။ တစ်ခုခုဖြစ်တော့မည်ကို ကြိုသိနေသည်။ သူရင်းငှား ကတော့ ပုံမှန်မဟုတ်သော ကျွန်တော့်ကို ကြိမ်ဖြင့် နာနာနှက်ရင်း ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းနေလေတော့သည်။ ဒီနေ့ အဖို့ အရင်နေ့တွေက် အချိန်ကုန်တာ အရမ်းနှေးလှတယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်နေမိသည်။
ညနေ လယ်သိမ်းအိမ်ပြန်ချိန်ရောက်တဲ့အထိ ကျွန်တော် စိတ်မကြည်နိုင်သေး..၊ ကျွန်တော် သိသည်။ ကျွန်တော့် သားလေး တစ်ခုခု ဖြစ်နေပြီ..။ သားသမီး တစ်ခုခုဖြစ်ရင် စိတ်ထဲက သိနေတတ်သော မိဘတို့ရဲ့ စိတ်ကလေး ကျွန်တော့်စီမှာ ရှိသည် ထင်သည်။ ကျွန်တော့် သားလေး ဘာမှ မဖြစ်ပါစေနဲ့ ဘုရား..။ ပြုခဲ့သမျှ ကောင်းမှုကြောင့် သားလေး ဘာမှ မဖြစ်ပါစေနဲ့ဘုရား..။ လူ့ဘ၀မှာ ဘုရား တရားမေ့နေတတ် သော ကျွန်တော်သည် နွားဘ၀ရောက်မှ သားလေးအတွက် ဘုရား တ တတ်လေပြီ…။
ထင်သည့်အတိုင်းပင် အိမ်ပြန်ရောက်တော့ သားလေးနဲ့ ချစ်ကို မတွေ့..၊ သူရင်းငှားကတော့ ဘေးအိမ်က လူတွေကို လှမ်းအော်မေးနေသည်။
"နွားအပ်မလို့ဗျို့..၊ ဒီကအမ ဘယ်သွားခဲ့လဲ မသိဘူး.."
"နေ့လည်က ကျောင်းမှာ သူ့သားလေး..၊ ပိုးထိလို့တဲ့..၊ ဆေးပေးခန်း သွားတယ်…"
ကျွန်တော့်ခေါင်းတစ်ခုလုံး ချာချာလည် သွားသည်ထင်သည်။ ကျွန်တော့်မျက်စိထဲ ဘာမှ မမြင်ရတော့..၊ ဘာမှ မလုပ်ရပဲနဲ့ အသက်ရှုမြန်လာပြီး ကျွန်တော့်ရင်ဘတ် အစုံတို့သည် နိမ့်ချည်မြင့်ချည် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သားလေး ပိုးထိတယ်တဲ့..။ ဒီရွာမှာ ပိုးထိပြီဆိုလျှင် ရှင်တဲ့သူက ရှားသည်။ ကလေးဆိုရင် ပိုဆိုးသည်။ ကျွန်တော် ဆက်မတွေးရဲတော့… သူရင်းငှား က ကျွန်တော့်ကို ခြံထဲက တိုင်တစ်တိုင်မှာ ကြိုးချည်ထားခဲ့သည်။ ကျွန်တော် လုပ်စရာ တစ်ခုပဲ ရှိတော့သည်။ သားလေး ဘာမှ မဖြစ်ပါစေနဲ့ဘုရားးး…။
ခဏကြာတော့ ချစ် တစ်ယောက်တည်း အိမ်ပြန်လာသည်။ ချစ်ပုံစံကြည့်ရတာ မျက်နှာမကောင်း၊ ကျွန်တော့် စိုးရိမ်စိတ်တို့ ငယ်ထိပ်သို့ရောက်လာသည်။ သားလေး နေကောင်းရဲ့လား..၊ သားလေး ကျန်းမာရဲ့လား..၊ ဂဏှာမငြိမ် ဖြစ်နေသော ကျွန်တော့်ကို ချစ်တွေ့သော်လည်း ဂရုမစိုက်အားမှန်း ကျွန်တော် သိသည်။ ဘေးအိမ်မှ ဒေါ်ကြီးနဲ့ ချစ်တို့ရဲ့ အပြန်အလှန် ပြောနေတာကို ကျွန်တော် နားစွင့်နေလိုက်သည်။
"မိမော်ရေ..၊ ညည်းသားလေး အခြေအနေ..ဘယ်လိုလဲ..? "
"ခုဆေးပေးခန်းမှာ၊ ဒေါ်ကြီး..၊ သားလေးကို မြို့ဆေးရုံပို့ရမယ်တဲ့..၊ အဲ့ဒါမှ အသက်မှီမှာတဲ့.."
"ဟဲ့…ငါပြောနေတာ မကြာဘူးလား..၊ ဆေးရုံပို့ဖို့ လုပ်ပါဆို…"
"ဒေါ်ကြီးရယ်..၊ ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲ…။ ပို့ချင်တာပေါ့တော်… ဒါပေမယ့် ကျွန်မမှာ ပိုက်ဆံက…..….."
"အေး..၊ ဒါတော့ ငါတို့လည်း ဆင်းရဲသားဆိုတော့ အများကြီး မကူနိုင်ဘူး..၊ တစ်ခုတော့ ရှိတယ်..၊ ငါတို့ရွာက အမဲဒိုင်မှာ ညိုမောင်းကြီး ခဏအပ်လိုက်ပါလား..၊ ညည်းပိုက်ဆံရမှ ပြန်ရွေးပေါ့.."
"အို… ညိုမောင်းကြီးတော့ မအပ်နိုင်ပါဘူးတော်..၊….."
"ဟဲ့..၊ အပ်တာဆိုတာ ရောင်းတာမှ မဟုတ်တာ..၊ ညည်းငွေပေါ်ရင် ပြန်ရွေးလို့ရတာပဲဟာကို..၊ ညည်းသားက သေရေးရှင်ရေးနော် မိမော်..သည်း သေချာစဉ်းစား"
"အိုအေ…၊ နင်စဉ်းစားမနေနဲ့တော့..၊ လာငါ့နောက်သာလိုက်ခဲ့…"
ပြောပြောဆိုဆို ဒေါ်ကြီးက ကျွန်တော့်ကို ဆွဲခေါ်ပြီး ခြံဝန်းထဲကနေ ဦးဆောင်ထွက်သွားသည်။ ဟုတ်ပါတယ်…။ ဒါအသင့်တော်ဆုံး အကြံဥာဏ်ပါ..။ ဒေါ်ကြီးကို ကျွန်တော့်စိတ်ထဲကနေ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကို ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်..။ ဟုတ်တယ်လေ..။ ကျွန်တော့်ကြောင့် ရတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ သားလေး အသက်ကို ကယ်နိုင်တော့မည်လေ…..။
"တစ်လအတွင်း ပြန်မရွေးရင် အဆုံးနော်…"
"ကဲ..ရော့… တစ်သိန်း…၊ ဟိုကောင်တွေ လာစမ်းဟေ့…၊ ဒီကောင်ကြီးကို ဟိုးဘက်က ခြံထဲ ထည့်ထားလိုက်…"
ကျွန်တော့် သူ့တို့ ဆွဲခေါ်ရာနောက်ကို အသာတကြည်ပဲ လိုက်ခဲ့လိုက်သည်။ ကျွန်တော် ချစ်ကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်သည်။ ချစ်မျက်ဝန်းမှ မျက်ရည်တို့ စီးကျလာသည်။ ကျွန်တော် အံ့သြသွားသည်။ ချစ်က တော်ရုံ ငိုခဲသည့် မိန်းမမျိုးမဟုတ်..။ ကဲ…ကျွန်တော် မပြောဘူးလား… ချစ်က ကျွန်တော့်အပေါ် သံဃောဇဉ် ကြီးပါတယ်လို့..။
ဒီလိုနဲ့ ခြံထဲမှာ နေရင်း နေ့စဉ်ရက်ဆက် ကျွန်တော် သားလေးအတွက် ဆုတောင်းခဲ့သည်။ ယခုအချိန် သားလေး အသက်ရှင်ဖို့ဆိုရင် ကျွန်တော့် အသက်၊ ကျွန်တော့် ခန္ဓာကိုယ်ကို ပေးဖို့ ကျွန်တော် အသင့်ဖြစ်နေပြီ..၊ သားလေးသည်သာ ကျွန်တော့် ဘ၀..၊ သားလေးသည်သာ ကျွန်တော့် ကမ္ဘာ…..။ သားလေး ကျန်းမာဖို့ အရေးသည်သာလျှင် ဒီအချိန်မှာ အရေးအကြီးဆုံးအရာ..။ ဒါပေမယ့် သေချာပါတယ်..။ ကျွန်တော့် သားလေး ပြန်ကျန်းမာ လာမှာပါဗျာ။ ပြီးတော့ ချစ်နဲ့ သားလေး ကျွန်တော့်ကို ပြန်လာခေါ်ကြလိမ့်မယ်.. ပြီးတော့ အရင်လို ကျွန်တော် သူတို့တွေကို လုပ်ကျွေးမယ်..။ ကျွန်တော် နောက်ဆုံး ထွက်သက်ထိ ချစ်နဲ့ သားလေး ဘေးမှာ နေသွားမယ်…
ဒီနေ့……. ကျွန်တော့်ကို သူတို့ ခြံထဲက ဆွဲထုတ်နေကြသည်။ ချစ်တို့ ကျွန်တော့်ကို ပြန်လာရွေးတာဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်တော် မျှော်လင့် စောင့်စားခဲ့တဲ့ နေ့ရက် တို့ ရောက်လာပြီလေ…။ သားလေးနဲ့ တွေ့ရတော့မည်။ ချစ်နဲ့ တွေ့ရတော့မည်။ သို့ပေမယ့် ခြံပြင်ရောက်တော့..၊ ချစ်နဲ့ သားလေးကို ကျွန်တော်မတွေ့….၊
"ဒီကောင်ကြီးကို ကြိုးချည်လိုက်..၊ မြဲအောင်ချည်နော်…. အကောင်ကကြီးတော့ ရုန်းကန်ရင် လွတ်သွားနိုင်တယ်.."
လူလေးယောက်လောက် ကျွန်တော့်ကို တွန်းလှဲပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့ ရှေ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းနဲ့ နောက်ခြေထောက် နှစ်ချောင်းကို ပူးတွဲပြီး ချည်လိုက် သည်။ တစ်ခုခုတော့မှားနေပြီ..၊ သူတို့ ဘာလုပ်ကြတာလဲ..၊ ကျွန်တော့်ကို ပြန်လာရွေးမှာလေ..၊ ကျွန်တော့်ကို သူတို့ ပြန်လာရွေးကြမှာ…။
"ဟိုကောင်၊ ခွက်တစ်လုံးယူခဲ့..၊ သွေးခံရအောင်၊ အမဲသွေးခဲတွေက ဈေးကောင်းတယ်…"
အို…ကျွန်တော့်ကို သတ်ကြတော့မှာပါလား..။ ကျွန်တော့်ကို သူတို့ လည်လှီးဖို့ လုပ်နေကြတာပါလား..။ ကျွန်တော် အခုမှ အသိတရားဝင်ပြီး ရှိသမျှ အားနှင့် ရုန်းကန်သည်။ သေရတော့မယ် ဆိုတဲ့ အသိ၊ ချစ်နဲ့ သားလေးတို့ကို ခွဲသွားကြရတော့မယ် ဆိုတဲ့အသိကြောင့် ကျွန်တော် ပိုရုန်းကန်မိသည်။ သို့ပေမယ့် ကျွန်တော့်ကို ဖမ်းချုပ်ထားတာ ဥာဏ်ရည်မြင့်တဲ့ လူတွေလေဗျာ…။ ကျွန်တော် ဘယ်ရုန်းနိုင်ပါ့မလဲ……
"ကဲ..စမယ်…ခြေ လက်တွေကို ချုပ်ထား..၊ တစ်ယောက်က ဂြိုလ်ကို လာကိုင်ထားစမ်း…"
ကျွန်တော် နောက်ဆုံးအချိန်ထိ ချစ်တို့ကို မျှော်နေမိသည်။ သူတို့လာမှာပါ..။ သူတို့ ကျွန်တော့်ကို လာခေါ်ကြမှာပါ..။ ချစ်နဲ့ သားလေးက ကျွန်တော့်ကို အရမ်းချစ်တာမှတ်လား..။ သူတို့ ကျွန်တော့်ကို ဒီလို ဘယ်အဖြစ်ခံပါ့မလဲ..၊ သူတို့လာခေါ်ကြမှာပါ…။
"ဟုတ်ပြီ..၊ သေချာကိုင်ထား..၊ ကဲ..ဓါးသွားယူခဲ့တော့.."
ကျွန်တော့်ကို ကြိုးချည်ထားသည့်အပြင် လူလေးယောက်လောက် ချုပ်ထားတာကြောင့် လုံးဝ လှုပ်လို့မရတော့..၊ ကျွန်တော်လဲလျက်ကပင် ခြံပေါက်ဝ လူဝင်လမ်းကို ချစ်နဲ့သားလေးတို့ လာမလားလို့ မျှော်ကြည့်မိနေသည်။
ဟော.. ပြောရင်း ဆိုရင်း.. လူတစ်ယောက်လာနေပြီ..ချစ်နဲ့ တူလိုက်တာ…. ဟုတ်ပါတယ်…ချစ်ပါ…. မလွဲပါဘူး..၊ အဲ့ဒါ ကျွန်တော့် မိန်းမ ချစ်ပါ..။ ချစ် ကျွန်တော့်ကို ပြန်လာရွေးတာလေ…ကျွန်တော် မသေတော့ ဘူးပေါ့.. ဒါနဲ့ နေပါအုံး… ချစ်က ဘာလို့ ကခုန် နေတာပါလိမ့်..…၊ ပါးမှာလည်း သနပ်ခါးအဖွေးသားနဲ့..၊ နှုတ်ခမ်းနီတွေလည်း ဆိုးလို့၊ ရင်ဘတ်မှာလည်း နို့ဆီဗူးတွေ တို့လို့ တွဲလောင်း……အို…ခေါင်းမှာ ပန်းတွေလည်း ပန်လို့ပါလား..…. သီချင်းတွေလည်း အော်ဆိုလို့…. ဘေးနားမှာလည်း ချစ်ကို လိုက်ဟောင် နေတဲ့ ခွေးတစ်အုပ်…. အို…ဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲ ချစ်ရယ်… ဘာဖြစ်လို့ ဒီလို ဖြစ်သွားရတာလဲ… နေပါအုံး.. ချစ်လက်ထဲမှာ ဘာလေး ကိုင်ထားတာပါလိမ့်…. အိုး… ကလေး အရုပ်လေး တစ်ရုပ်ပါလား…..။
ကျွန်တော် မျက်လုံး မှိတ်လိုက်သည်။ ဓါးသွားနဲ့ ကျွန်တော့် လည်ပင်း သွေးကြောအထိအတွေ့ကို ကျွန်တော်သိသည်။ ကျွန်တော့် လည်ပင်းက သွေးတွေ ပန်းထွက်နေတာ ကျွန်တော်သိသည်။ ကျွန်တော် မရုန်းချင်ပေမယ့် မသိစိတ်ရဲ့ ခိုင်းစေမှုကြောင့် ကျွန်တော့် ခန္ဓာကိုယ်တွေ ရုန်းကန်နေတာ ကျွန်တော် သိသည်။ ဒါပေမယ့် ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော့်အတွက် နာကျင်မှုဆိုတာ မရှိတော့ပါဘူးဗျာ….။ ကျွန်တော် နောက်ဆုံး အချိန်မှာ ဘ၀ကူးကောင်းဖို့ ဘုရားတရားကို အာရုံပြုနေချင်ပေမယ့် မြင်နေရတာက သားလေးနဲ့ ချစ်တို့ရဲ့ ၀ိုးတ၀ါး မျက်နှာ နှစ်ခု..….၊ ကျွန်တော် မငိုပါဘူး..။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် မျက်ရည်တော့ ကျနေပါလိမ့်မယ်……..
ပြီးအောင် ဖတ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။ ကျွန်တော့်စာလေး ဖတ်ပြီး စာဖတ်ရင်ထဲ တစ်ခုခု ခံစားရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် ရေးရကျိုး နပ်ပါတယ်..။
စူပါဟီးရိုးရုပ်ရှင်တွေထဲက မှတ်သားစရာ ပြောစကားကောင်...
အမျိုးသမီးများအား ချဉ်းကပ်ရာဝယ် သတိထားသင့်တဲ့ အမှာ...
ရှောင်ကြည်သင့်တဲ့ လူငယ်၊လူလတ်ပိုင်းအကြိုက် အစားအသေ...
လူအင်အားကို အားပြုရတဲ့အသံတိတ်ရုပ်ရှင်ခေတ်အကြောင်း ...
၂၄.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ The Voice Weekly သတင်းစုစည်းမှု
၂၄.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ VOA သတင်းစုစည်းမှု
၂၄.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ 7Day Daily oတင်းစုစည်းမှု
“ခွင့်လွှတ်ခြင်း ဆိုတဲ့အရာက အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းနည်...
ဘုရားလောင်း မိန်းမဘဝ ဖြစ်ဖူး၊ မဖြစ်ဘူး
၂၂.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ 7Day Daily သတင်းစုစည်းမှု
သတင်းထောက် ဆိုတာ ဆုရဖို့ လုပ်တာ မဟုတ်ဘူး
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘိုးဘွားတွေ တောင်းရမ်းစားသောက်တာလ...
၂၁.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ VOA သတင်းစုစည်းမှု
၂၁.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ 7Day Daily သတင်းစုစည်းမှု
၀ိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းဖို့ အထူးလိုအပ်နေတဲ့ရုပ်သေး (သ...
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ နှင့် ပတ်သက်၍ အနုပညာရှင် တ...
အမတ်ကြီး ဦးပေါ်ဦး၏ ယမမင်းထံ အစစ်ခံ သံပေါက်
၂၀.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ VOA သတင်းစုစည်းမှု
၂၀.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ 7Day Daily သတင်းစုစည်းမှု
မှောင်မိုက်မှာငို ကမ္ဘောဒီးယား မိန်းမပျိုတို့ဘဝ
၁၉.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ VOA သတင်းစုစည်းမှု
၁၉.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ The Voice Weekly သတင်းစုစည်းမှု
၁၉.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ 7Day Daily သတင်းစုစည်းမှု
ဆေးပေါင်းခ ပွဲနဲ့ ဒေးစွန်ပါ
“နိုဝင်ဘာလ သမိုင်း” - History of November
အံ့ဖွယ် စစ်ခေါင်းဆောင် (၅)ဦး
၁၈.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ The Voice Weekly သတင်းစုစည်းမှု
၁၈.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ Eleven သတင်းစုစည်းမှု
ချစ်ကြည်ရေးပွဲမှာ လူငယ်တွေ ထိုးကြိတ်ကြခြင်း
၁၈.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ 7Day Daily သတင်းစုစည်းမှု
၁၇.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ 7Day Daily သတင်းစုစည်းမှု
ကျွန်မဘ၀နဲ့ ရင်းလိုက်ရတဲ့ မောင်ရဲ့ မုသား
၁၆.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ VOA သတင်းစုစည်းမှု
ထားထက်ထက်ရဲ့ Best National Costume ပြိုင်ပွဲဝင် ပ...
လက်ပံတောင်းဒေသ မိုးကြိုးပြင်တောင်ရွာတွင် နိုဝင်ဘာ ...
လျှပ်စစ်မီတာခ တိုးမြှင့်မည်ဟု ကြေညာပြီးနောက်ပိုင်း...
၁၄.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ ဧရာဝတီ သတင်းစုစည်းမှု
၁၄.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ VOA သတင်းစုစည်းမှု
၁၄.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ Day Daily သတင်းစုစည်မှု
၂ လင် ၁ မယား
၁၃.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ VOA သတင်းစုစည်းမှု
၁၃.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ 7Day Daily သတင်းစုစည်းမှု
၁၂.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ The Voice Weekly သတင်းစုစည်းမှု
၁၂.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ VOA သတင်းစုစည်းမှု
၁၂.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ 7Day Daily သတင်းစုစည်းမှု
၁၁.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ The Voice Weekly သတင်းစုစည်းမှု
ကိုယ်ရွေးချယ်ခဲ့မိတဲ့ ဒီဇိုင်နာလိုင်းကြောင်း မှန်က...
၁၁.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ VOA သတင်းစုစည်းမှု
၁၁.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ 7Day Daily သတင်းစုစည်းမှု
အပစ်ရပ်က ဦးစားပေးလား၊ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှုက ဦးစား...
၁၀.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ VOA သတင်းစုစည်းမှု
၁၀.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ 7Day Daily သတင်းစုစည်းမှု
၉.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ Eleven သတင်းစုစည်းမှု
၈.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ The Voice Weekly သတင်းစုစည်းမှု
၉.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ 7Day Daily သတင်းစုစည်းမှု